Ogaden News Agency (ONA) – Wararka Ogadenya Ee Xarunta Dhexe Naga Soo Gaadhay.
Wararka Ogadenya Ee Xarunta Dhexe Naga Soo Gaadhay.
Posted by ONA Admin	/ August 6, 2018
Wararka naga sòo gaadhaya wadanka Ogadeniya gaar ahaan Xarunta Dhere ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) ayaa waxay sheegayaan in dagaal ku dhex maray labada Hawaarin ee Soomaalida iyo Oromada xuduuda u dhaxaysa labada gobol waxayna u dheceen sidan soo socota.
Shalay oo ay taariikhdu ahayd 5/8/18 meesha loo yaqaano Erar oo degmada Baabili katirsan waxaa dagaal ku dhex maray hawaarinada Soomaalida iyo Oromada, lagama hayo wax faah faahin ah oo dagaalkan ku saabsan iyo sidii uu u dhacay toona.
Isla shalay oo ay taariikhdu ahayd 5/8/18 deegaanka lagu magacaabo Dhagax-Dheer oo isla degmada Baabili katirsan waxaa dagaal ku dhex maray labada hawaarin ee Soomaalida iyo Oromada. Sidoo kale Degmada Tulli-Guleed tulooyin hoos yimaada ayay gubeen Oromadu dhamaantood waxaana hellay magacyadooda, waxayna kala yihiin:-
Dhamaan waygubeen oromadu tuuloyinkaa dadkiina way qaxeen.
Dhinaca kale saaka subixii waxaa Degmada Baabili lagu dilay wiil dhalinro ah oo aanan wali magaciisa haynin.